Michel Gonzalez Nuñez: “Heveriko fa manafintohina ny mankatoa lalàna momba ny ‘fahapelahana’ ao anatin’ny revolisiona be risikain-dehilahy” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2018 5:51 GMT
Michel Nuñez, sary avy amin'ny mpanao fanadihadiana. Nahazoana alalana.
Ity manaraka ity no resadresaka farany tamin'ny andiam-pifanakalozan-kevitra niarahana tamin'ireo mpikatroka LGBTQI Kiobàna miasa ao anatin'ny firenena sy ny olom-pirenena monina any ivelany. Azo vakiana ato sy ato ny resadresaka teo aloha, izay manasongadina ireo olana sarotra momba ny fanovana lalàna sy ny fahitan'ny fiarahamonina ny zon'ny LGBTQI.
Avy any Pinar del Rí, tanàna fahafolo lehibe indrindra ao Kiobà i Michel Gonzalez Nuñez izay manana mari-pahaizana momba ny asa fanaovan-gazety avy ao amin'ny Universidad de La Habana. Na dia fantatr'i Michel aza fa pelaka izy hatramin'ny naha tovolahy azy, dia tsy namoaka izany izy mandra-pahatongan'ny faha-24 taonany. Miara-mipetraka amin'ny sakaizany Noelio Hernández, Kiobàna mpiara-miasa avy any Nuevitas, any amin'ny faritr'i Camagüey i Michel. Efa niaraka nandritra ny roa taona i Michel sy Noel, ary toy ny Kiobana hafa any ampielezana, monina any Miami, Etazonia izy ireo; Na izany aza, ny mampiavaka azy ireo amin'izany ampielezana izany dia hivady tsy ho ela i Michel sy Noel – zavatra mbola tsy azo atao ao Kiobà, tanindrazan'izy ireo.
Niresaka tamin'i Michel momba ireo olana sasany mahakasika ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LGBTI izay tsy afaka mampihatra zo tahaka an'i Michel sy Noel, manomboka amin'ny lafiny ara-dalàna hatramin'ny zavatra niainany manokana sy ireo olom-pantany ny Global Voices:
GV: Mihevitra aho fa mahaliana anao ny fankatoavana ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana ao Kiobà. Araka ny hevitrao, ahoana no ahafahana mihevitra izany?
MG: Tonga tany Etazonia aho mba hanangana ny fianakaviako manokana, ankoatra ny zavatra hafa. Zava-dehibe amiko ny fahafahan'ireo olona mitovy fananahana manangana fianakaviana any amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao – amin'ny fomba ara-dalàna sy amin'ny zo rehetra. Manoloana ny foto-keviny, tokony ho iray amin'ireo firenena voalohany mankasitraka sy miaro ny fitovian'ny fanambadiana ho an'ny rehetra i Kiobà. Izany no tokony hataon'ny governemanta “revolisionera” amin'ny heviny rehetra.
Hafa tanteraka ny zavamisy, na izany aza. Araka ny voalazan'ny governemanta, ny fiarahamonina Kiobana dia tsy vonona handray ity dingana ity. Ankoatra izany, misy ny soso-kevitra momba ny Fehezan-dalàna “vaovao” momba ny fianakaviana, saingy nafenina nandritra ny taona maro tao amin'ny biraon'ireo izay tokony nankatoa ny tolo-kevitra tao amin'ny Antenimieram-pirenena izany. Ny hany zava-“baovao” dia antsoin'izy ireo hoe “vaovao” izany.
[Ao Kiobà, ny fitsipi-pianakaviana dia lahatsoratra ara-dalàna natokana handaminana ny zon'ny fianakaviana. Io lahatsoratra io dia mahaleo tena amin'ny Fehezan-dalàna Sivily ary noforonina mba hiarovana amin'ny fomba manokana sy mivantana ny sehatra ara-dalàna eo amin'ny lalànam-panjakana sy ny lalàna an'olona manokana].
Mieritreritra aho fa mety hanafintohina ny fandaniana lalàna momba ny “fahapelahana” ao anatin'ny “revolisiona” be risikain-dehilahy. Ny dikan'izany voalohany indrindra dia ovaina ireo olona misahana ny fandraisana karazana fanapahan-kevitra toy izany amin'izao fotoana izao. Avy eo, tokony hanana fahatakarana tsara sy feno kokoa momba ny lohahevitra ireo mpanapa-kevitra vaovao. Tokony ho afaka miresaka ireo raharaha isan-karazany ao anatin'ny fisokafan-tsaina, manaiky manao ny anjara asan'ny Fanjakana izy ireo, fa tsy olona “mirehareha amin'ny heriny”, toy ny hatramin'izao..
Na izany aza, hoy koa izy:
MG: Hatramin'ny fiantombohan'ny fiarahamonina maoderina, mpialoha lalana ny fizotry ny fandraisana fanapahan-kevitra tao Kiobà. Anisan'ireo firenena voalohany nanana oniversite (1728) izahay ary nampihatra fomba fampianarana vaovao izay niala tamin'ny fihenjanan'ny fampianarana tamin'izany fotoana.
Nampiharina tao Kiobà ny fandrosoana ara-teknolojia tamin'ny famokarana sy ny fampandrosoana toy ny milina mandeha etona (1796) sy ny lalamby (1837). Nifandray hatrany tamin'ireo hevitra tsara sy mandroso indrindra, na ao an-toerana na any ivelany ny fiarahamonina, ary nampiasa izany fahalalana izany ho an'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-tsaina. Anisan'ireo firenena voalohany nankatoa ny zon'ny vehivavy hifidy 1934) sy ny fanalan-jaza (1968) izahay; ary voalaza fa iray amin'ireo lasa aloha indrindra tamin'izany fotoana izany ny Lalàmpanorenan'i Kiobà 1940.
Raha azo atao izany rehetra izany sy ny maro hafa, nahoana ny mpitondra no milaza fa tsy vonona hankatoa ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana ny fiarahamonina Kiobana?
Ankehitriny, tokony hoentina eny amin'ny parlemanta Kiobàna mba horesahana am-pahamatorana sy am-pahatsorana ity volavolan-dalàna ity, saingy tsy mino aho fa manana ny zavatra ilaina mba hanaovana izany.ny mpitarika nentim-paharazana.
“Azavao amiko ny dikan'ny “revolisonera.”
GV: Mahafantatra tranga tsy ara-drariny niaretan'ireo mpifankatia pelaka ao Kiobà noho izy ireo tsy mpivady ara-dalàna ve ianao?
MG: Mana-namana izay ao anatin'ny fiarahana matotra efa naharitra nandritra ny roapolo taona mahery aho, saingy mbola tsy manan-jo hanao ofisialy izany fiarahana izany eo ambanin'ny lalàna izy ireo, na dia miezaka manome ny lovany ho an'ny sakaizany aza izy ireo. Farany, fanapahan-kevitra iray miankina amin'ny sitrapon'ny havana akaiky izany. Tsy misy antoka ara-dalàna na ara-moraly hiantohana fa hotanteraka ny fikasana nambaran'izy ireo.
GV: Ary ahoana ny amin'ny tranga tsy ara-drariny atrehan'ireo mpifankatia ao anaty fiarahana ara-dalàna?
MG: Taona maro lasa izay, nandeha tany Kiobà niaraka tamin'ny sakaizany izay olom-pirenena Espaniola ny iray tamin'ireo namako akaiky indrindra. Nijanona tao amin'ny Habana Libre [hotely] izy ireo. Rehefa niverina avy nandehandeha manodidina ny tanàna izy ireo dia tsy navelan'ny mpiambina ny hotely hiverina tao amin'ny efitranony. Noheverin'ilay mpiasa misahana ny fandraisana vahiny fa mpivarotena ny [namako Kiobana]. Nanjary nanahirana ny toe-draharaha rehefa hita fa lehilahy Kiobàna fa tsy olom-pirenena Espaniola no nandoa vola tamin'ny ny famandrihana ny hotely (toy izany koa ny fandaniana tamin'ny dia). “Fialan-tsiny noho ny fanelingelenana” no mba azon'izy ireo taorian'izany.
Tany amin'ny toeran-kafa, fantatsika fa mety ho ratsy be ho an'ny hotely ny fisian'ny fanavakavahana. Saingy ao Kiobà, tsy izany no mitranga. Aleon'ny olona hatrany mangina ny pelaka.
GV: Fantatsika fa ao anatin'ny tolo-kevitry ny Fehezandalàna momba ny Fiainam-pianakaviana vaovao, izay mbola tsy naseho tao amin'ny parlemanta Kiobana, tsy tafiditra ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana fa ny “fikambanana ifanarahana” no voalaza. Ahoana ny hevitrao momba izany?
MG: Heveriko io fa felaka iray hafa amin'ny fidarohana ny vondrom-piarahamonina LGBTQI Kiobana.
Raha ampahany ihany ny zo sy fahafahana mametraka ny fiarahamonina ho “revolisionera”, dia mila olona aho manazava amiko ny dikan'ny hoe “revolisionera”. Misy fifanoheran-kevitra izany ho ahy.
Ao amin'ny lahatsoratra iray navoakan'i Granma (sampan'ny Antoko Komonista Kiobà) efa-taona lasa izay, mpaneho hevitra iray antsoina hoe Ernesto Martínez Hernández nilaza fa “… tsy fanajana ny fiarahamonina ny famelana malalaka ny fanambadiana gay, toy ny tsy fetezan'ny famelana ny fifanarahana ara-dalàna eo amin'ny olona sy ny biby. Tsy tokony ho ara-dalàna izy io satria tsy voajanahary izany. Misy olon-droa miaina ny fiainany manontolo tsy manambady, [maninona] no miady haha-ara-dalàna ny zavatra tsy araka ny natiora? “Ahoana no hamalianao an'io fisainana io?
MG: Ho an'i Granma dia miteny aho fa mahasosotra ny mandany toerana kely sy mamoaka eritreritr'adala tahaka izany. Ary tsy mendrika hahazo iray minitra amin'ny fotoananay Atoa Martínez Hernández. Ny angovo, ny ezaka sy ny eritreritray dia tokony hifantoka amin'ny fanohanana, fiarovana ary fampiroboroboana ny zo sy fahalalahan'ny fiarahamonina Kiobana, ho an'ny olona rehetra, anisan'izany ny fiarahamonina pelaka … anisan'izany ny zon'Atoa Martínez Hernández.
9 ora izayKiobà